Deerskin လက်အိတ်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Deerskin လက်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများ
သိုးမွှေးနှင့်အတူစတိုင်ဂန္ထဝင် deerskin လက်အိတ်
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း styl စတိုင်လက်အပေါက်များနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီးခေါက်ထားသည့်ခလုတ်ကိုပိတ်ထားသောလက်အိတ်၏နောက်ကျောသားရေလက်အိတ်။ အခြား collocate 100% feeece cuff ။ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ခြင်း။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနောက်ကျောသည်သင်၏လက်များအတွက်အမြင့်ဆုံးသက်သာသောစွမ်းရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးသည်။ ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-015M ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% စစ်မှန်သောသမင်●●နံရံ - သိုးမွေးနံရံ●အရောင် - အနက်ရောင်ခ ...
အချက်သုံးချက်ပါသည့် Deerskin ကျပန်းစတိုင်လက်ကိုင်လက်အိတ်များ
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံနိုင်သော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်， လက်ဖြင့်ချုပ်ထားသောအချက်သုံးချက်သည်ကျောဘက်တွင်ချုပ်ထားသည်။ cuff တွင်ချိန်ညှိနိုင်သည့်လျှပ်တစ်ပြက်ပိတ်ထားသောအပေါက်ငယ်တစ်ခုနှင့်လက်ပတ်နာရီတစ်ခု။ လက်အိတ်၊ အလှအပနှင့်အဆင်ပြေမှုတို့ပါ ၀ င်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင် elastic band လည်းရှိသည်။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ပြင်ပအားကစား၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-008H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% စစ်မှန်သောသမင်●●နံရံ - ငွေရှင်းနံရံ - အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - ...
သုံးမှတ်နှင့်အတူပေါ့ပေါ့ handsewn deerskin လက်အိတ်
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်， အားလုံးသည် handsewn.Design ဖြစ်သည်။ လက်သုံးချောင်းဖြင့်ကျောဘက်တွင်ချုပ်ထားသည်။ cuff တွင်ချိန်ညှိနိုင်သည့်လျှပ်တစ်ပြက်ပိတ်ထားသောအပေါက်ငယ်တစ်ခုနှင့်လက်ပတ်နာရီတစ်ခု။ အလှအပနှင့်အဆင်ပြေ။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ပြင်ပအားကစား၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-007H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●●နံရံ - ငွေရှင်းနံရံ - အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 အမျိုးသား - S /8.5,M/9,L/9.5 ...
ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံ deerskin ၏လက်လက်ပုံစံဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး cuff ၏ဘေးတွင်သေးငယ်သည့်အပေါက်တစ်ခုနှင့် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည့်လက်အိတ်၏လက်ကောက်ဝတ်ပတ်ပတ်လည်အလယ်အလတ် elastic band ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံအပြင်ဘက်အားကစား၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်သင့်တော်သည်။ စူပါပျော့ပျောင်းသော်လည်းခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့, ။ ●အနုပညာနံပါတ် - DG-006H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●အနံ - မဖြည့်ပါ●အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 အမျိုးသား - S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: ဟုတ်ကဲ့ ...
သုံးမှတ်နှင့်ကျပန်း handsewn လက်အိတ်မောင်း Deerskin
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin လက်လက် stich design ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး cuff ၏ဘေးဘက်တွင်သေးငယ်သည့်အဖွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ အားကစားရုံ၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-005H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●အနံ - မဖြည့်ပါ●အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 အမျိုးသား - S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: ဟုတ်သည်● MOQ: 200 prs
handsewn နှင့်အတူဖက်ရှင်လက်အိတ် Deerskin
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်， အားလုံးသည်လက်ဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ နောက်ကျောသားရေစတိုင်ကျောပေါက်များနှင့်ခိုင်ခံ့သောခလုတ်ကိုပိတ်ထားသည့်လက်ပတ်နာရီများပါရှိသည်။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ ဖောက်ထားသည့်သားရေနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနောက်ကျောသည်သင်၏လက်ကိုအမြင့်ဆုံးအသက်ရှုနိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ကားမောင်းရန်၊ စက်ဘီးစီးရန်၊ စက်ဘီးစီးရန်၊ အားကစားရုံ၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-003H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●အနံ - မဖြည့်ပါ●အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား ...
Deerskin ကားမောင်းသောဖက်ရှင်လက်ဖြင့် / လက်လုပ်လက်အိတ်များ
ပျော့ပျောင်းပြီးကြာရှည်ခံ deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်， အားလုံးသည်လက်ဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသော်လည်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခိုင်ခံ့သော၊ ဖောက်ထားသည့်သားရေနှင့်လေဝင်လေထွက်ရှိသောနောက်ကျောသည်သင်၏လက်များအတွက်အမြင့်ဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကြံ့ခိုင်ခလုတ်ကိုပိတ်ပစ်နှင့်အတူလက်ပတ်နာရီ။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ●အနုပညာနံပါတ် - DG-002H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●●နံရံ - ငွေရှင်းနံရံ - အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 အမျိုးသား - S /8.5,M/9,L/9.5, ...
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်， အားလုံးသည် handsewn.Design ဖြစ်သည်။ လက်သုံးချောင်းဖြင့်ကျောဘက်တွင်ချုပ်ထားသည်။ cuff.openings တွင်အပေါက်ငယ်တစ်ခုသည် palm သို့မဟုတ် back တွင်ရှိသည်။ သင်သုံးရန်အဆင်ပြေသည်။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ အားကစားရုံ၊ စူပါအပျော့သေးခံနိုင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့! ●အနုပညာနံပါတ် - DG-001H ●ပစ္စည်း - ၁၀၀% အစစ်အမှန်သမင်●အနံ - မဖြည့်ပါ●အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ●အရွယ်အစား - Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 အမျိုးသား - S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: ဟုတ်သည်● MOQ: 200 prs
လက်ချောင်းတစ်ချောင်း / လက်ချောင်းမရှိသောမောင်းနှင်မှုဖက်ရှင်သမင်လက်အိတ်များ
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး tight တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားပြီးလက်အားကောင်းသည်ကိုခံစားစေသည်။ စတိုင်လက်ပေါက်များနှင့်ခိုင်ခံ့သောခလုတ်ပိတ်ထားသောလက်ပတ်နာရီများပါ ၀ င်သော deerskin လက်အိတ်များ။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ Perforated သားရေနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနောက်ကျောသည်သင်၏လက်များအတွက်အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်နိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးသည်။ လက်ချောင်းတစ်ခြမ်း၏သားရေလက်အိတ်တိုင်းကို ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောလက်မှုပညာရှင်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ပြင်ပအားကစား၊ ပျော့ပျောင်းသော်လည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည် ...
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသော deerskin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး tight တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားပြီးလက်အားကောင်းသည်ကိုခံစားစေသည်။ Deerskin လက်အိတ်များသည် Viscose ကွင်းဆက်ပိတ်ထားသောနံရံနှင့်လက်ပတ်သိုင်းကြိုးများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ ထို့အပြင်သင်၏လက်များအတွက်အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကိုလည်းပေးသည်။ လက်ချောင်းတစ်ခြမ်း၏သားရေလက်အိတ်တိုင်းကို ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောလက်မှုပညာရှင်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ပြင်ပအားကစား၊ စူပါပျော့ပျောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခိုင်ခံ့မှု၊